South Africa nwere onye minista njem nlegharị anya ọhụrụ: Onye bụ Lindiwe Sisulu?
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na South Africa » South Africa nwere onye minista njem nlegharị anya ọhụrụ: Onye bụ Lindiwe Sisulu?
Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Akụkọ kacha ọhụrụ na South Africa • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Hon. Liniwe Nonceba, onye minista njem nlegharị anya South Africa
Na Wenezde, Ọgọstụ 4 Hon. Lindiwe Nonceba Sisulu bụ Mịnịsta na -ahụ maka ebe obibi mmadụ, mmiri na idebe ihe ọcha maka South Africa. N'ụbọchị ahụ ọ nabatara nyocha nke SIU n'ime ngalaba ya iji wepu aghụghọ na nrụrụ aka. Otu ụbọchị ka e mesịrị na Tọzdee, Ọgọst 5 a họpụtara minista a ka ọ bụrụ minista njem nlegharị anya na South Africa.
Omume rụrụ arụ n'ofe ngalaba steeti niile na ụlọ ọrụ steeti abụghị ihe pụrụ iche ma ọ bụ kewapụrụ na mmiri na ịdị ọcha.
Kọmitii njem nlegharị anya nke Afrịka dị njikere ịlụ ọgụ n'akụkụ otu ndị mmeri iji wughachi njem nlegharị anya na Africa
A mụrụ Lindiwe Nonceba Sisulu na Mee 10, 1954 na onye otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị South Africa, onye otu omeiwu kemgbe 1994.
Onye isi oche Hon. Onye isi oche SA Cyril Ramaphosa họpụtara Lindiwe Nonceba Sisulu ka ọ bụrụ Minista njem nlegharị anya n'etiti ọgba aghara COVID-19.
Cuthbert Ncube, Onye isi oche nke Ndị njem nlegharị anya nke Africa kelere Sisulu ma nyekwa nkwado ya iji nyere onye ozi ọhụrụ aka ịhazigharị akụkọ Afrịka site na njem.
Ndị bịarutere njem nlegharị anya na South Africa ruru ndekọ na Jenụwarị 2018 na 1,598,893 na Jenụwarị yana ndekọ dị ala 29,341 na Eprel 2020 n'ihi ọrịa COVID-19.
South Africa bụ ebe ndị njem nlegharị anya na ụlọ ọrụ ahụ na -enweta nnukwu ego ego mba ahụ nwetara.
South Africa na -enye ma ndị njem nleta ụlọ na mba dị iche iche nhọrọ dị iche iche, n'etiti ndị ọzọ, ọmarịcha odida obodo na idobere egwuregwu, ihe nketa ọdịbendị dị iche iche, na mmanya dị oke egwu. Offọdụ ebe ama ama gụnyere ọtụtụ ogige ntụrụndụ mba, dị ka Kruger National Park sara mbara na ugwu nke mba ahụ, oke osimiri na osimiri nke ógbè KwaZulu-Natal na Western Cape, yana isi obodo dịka Cape Town, Johannesburg, na Durban.
Onye minista ọhụrụ ahụ na -eweta ahụmịhe ọtụtụ iri afọ mana ọ ga -ejikwa aka ya rụzigharị njem njem na njem njem nke obodo ya. Ugbu a, COVID-19 nọ n'ọkwa ọzọ na ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi dị ala, na-eme njem nlegharị anya mba ofesi na obodo a nke na-agaghị ekwe omume.
Cuthbert Ncube, na -anọchite anya ụlọ ọrụ njem nlegharị anya nke Afrịka dịka onye isi oche nke Eswatini Ndị njem nlegharị anya nke Africa wepụtara nkwupụta.
Cuthbert Ncube, Onye isi oche nke Board of Tourism Board
Otu anyị bụ otu gị! Nke a bụ ozi olileanya na nkwado nke ndị isi ụlọ ọrụ na -ahụ maka njem nlegharị anya nke Afrịka.
Anyị dị ike ịkwado onye ozi ọhụrụ South Africa. Nke a ga -enyere ọ bụghị naanị South Africa, kama mpaghara niile na mba Afrịka ebe ụlọ ọrụ njem na -enye aka na GDP.
Cuthbert kwuru: Ọ bụ nnukwu nsọpụrụ na mkpali ka anyị na -anabata ma kelee Hon Lindiwe Nonceba Sisulu dị ka Minista njem na South Africa. Ahụmahụ ya sara mbara na nke oge ga -akwalite ebumnuche mgbake ọ bụghị naanị maka South Africa kamakwa maka kọntinent niile. South Africa guzo dị ka Ogige njikọta kọntinent nke Africa.
N'ọgbakọ ndị njem nlegharị anya nke Afrịka, anyị na -eleba anya na imekọ ihe ọnụ yana imekọ ihe ọnụ Ngalaba Nleta na South Africa n'ịkwado azụmaahịa na itinye ego n'ime njem nlegharị anya nke Africa, na-atụgharị aha njem nlegharị anya nke Africa, na-edegharị akụkọ Afrịka na ịkwalite njem nlegharị anya gburugburu ebe obibi, ka anyị na-akwalite maka uto na-adigide, uru na ịdị mma nke njem na njem gaa na site na Africa.
Njem nlegharị anya bụ otu n'ime mpaghara akụ na ụba na -ekwe nkwa na Africa. Ọ nwere ike ọ bụghị naanị ịkwalite uto akụ na ụba na kọntinent kamakwa ịkwalite mmepe akụ na ụba nke sitere na ya na -akpọ maka imekọ ihe ọnụ n'etiti mba ndị otu anyị na ndị na -ahụ maka ngalaba niile iji kwalite njem na -eme njem na mpaghara njem nlegharị anya.
Kọmitii Njem Nleta Africa na ndị nnọchi anya ya n'ofe mpaghara Afrịka bụ na -arụkọ ọrụ na ma ụlọ ọrụ nkeonwe ma nke ọha maka iwughari njem njem na njem nlegharị anya n'Africa.
Ònye bụ Hon Lindiwe Nonceba Sisulu
Onye isi ala South Africa Cyril Ramaphosa ahọpụtala Minista Lindiwe Sisulu dị ka Mịnịsta njem nlegharị anya na 5 Ọgọst 2021 na nhazi nke na -enweghị ebumnobi ọ bụla n'uche, ewezuga iwepụ gọọmentị nke ngalaba Zuma n'ime kabinet.
Onye minista njem nlegharị anya ọhụrụ bụ Fish Mahlalela na -akwado minista njem ọhụrụ ahụ. Ọrụ nke Ngalaba Njem Nleta bụ imepụta ọnọdụ ndị ga -enyere aka maka mmepe na -aga n'ihu na mmepe nke njem na South Africa.
Mịnịsta na -ahụ maka njem na South Africa, Hon. Lindiwe Sisulu
Sisulu mụrụ ndị ndu mgbanwe Walter na Albertina Sisulu in Johannesburg. Ọ bụ nwanne onye nta akụkọ Zwelakhe Sisulu na onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị Max Sisulu.
A họpụtara Nwada Sisulu ka ọ bụrụ Minista njem nlegharị anya na 5 Ọgọst 2021. Ọ bụ Mịnịsta na -ahụ maka ọnọdụ mmadụ, mmiri na idebe ihe ọcha site na 30 Mee 2019 ruo 5 Ọgọst 2021. Ọ bụ Mịnịsta nke Mmekọrịta mba ụwa na imekọ ihe ọnụ site na 27 February 2018 ruo 25 Mee 2019. Nwada Lindiwe Nonceba Sisulu bụ onye Mịnịsta na -ahụ maka ọnọdụ mmadụ na Republic of South Africa site na 26 Mee 2014 ruo 26 Februarị 2018.
Ọ bụbu onye otu omeiwu kemgbe 1994. Ọ bụ onye isi oche nke Inaugural nke Mgbakọ Minista Africa na -ahụ maka ụlọ na mmepe obodo kemgbe 2005. Nwada Sisulu bụ onye otu Kọmitii Executive nke National African Congress (ANC) na onye otu Kọmitii Na -ahụ Maka Ọrụ nke ANC. Ọ bụ onye nlekọta nke South Africa Democracy Education Trust; onye nlekọta nke Albertina na Walter Sisulu Trust; na onye otu Board nke Nelson Mandela Foundation.
Nwada Sisulu gụchara asambodo agụmakwụkwọ ya (GCE) ọkwa ọkwa nkịtị nke Mahadum Cambridge na St Michael's School na Swaziland na 1971, yana GCE Cambridge University Advanced Level na 1973, na Swaziland.
O nwere nzere Master of Arts na History site na Center for Southern African Studies nke Mahadum York na M Phil nwekwara site na Center for Southern African Studies nke Mahadum York nwetara 1989 na isiokwu edemede: "Women in Work and mgba mgbapụta na South Africa. "
Nwada Sisulu nwekwara akara nzere BA, akara nzere BA na akụkọ ihe mere eme, yana asambodo mmụta na mahadum Swaziland.
Ọrụ/Ọnọdụ/Ndị otu/Ọrụ ndị ọzọ
N'agbata 1975 na 1976, ejidere nwada Sisulu maka ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị. O mechara sonye na Umkhonto we Sizwe (MK) wee rụọ ọrụ na arụrụ ala ANC mgbe ọ nọ na mpụga site na 1977 ruo 1978. Na 1979, ọ nwetara ọzụzụ ndị agha ọkachamara na ọgụgụ isi ndị agha.
Na 1981, Nwada Sisulu kuziri ihe na Manzini Central High School na Swaziland, na 1982, ọ kuziri nkuzi na ngalaba akụkọ ihe mere eme nke mahadum Swaziland. Site na 1985 ruo 1987, ọ kuziri ihe na Manzini Teachers Training College na ọ bụ onye isi nyocha nke History for Junior Certificate Examinations for Botswana, Lesotho, na Swaziland. Na 1983, ọ rụrụ ọrụ dị ka onye nta akụkọ maka The Times of Swaziland na Mbabane.
Nwada Sisulu laghachiri na South Africa n'afọ 1990 wee rụọ ọrụ dịka onye enyemaka nke Jacob Zuma dịka onye isi ngalaba ọgụgụ isi ANC. Ọ rụkwara ọrụ dị ka onye isi nchịkwa nke ANC na Mgbakọ maka Democratic South Africa na 1991 yana onye nchịkwa ọgụgụ isi na Ngalaba ọgụgụ isi na nchekwa ANC na 1992.
Na 1992, Nwada Sisulu ghọrọ onye ndụmọdụ maka Kọmitii Na -ahụ Maka Ihe Ndị Ruuru Ụmụntakịrị nke Eductù Mmụta, Sayensị, na Ọdịbendị nke Mba Ndị Dị n'Otu. Na 1993, ọ rụrụ ọrụ dị ka onye ntụzi nke Govan Mbeki Research Fellowship na Mahadum Fort Hare, site na 2000 ruo 2002, ọ rụrụ ọrụ dị ka onye isi nke Command Center maka nwughari ihe mberede.
Nwada Sisulu bụ onye otu Kọmitii Njikwa, Ọgbakọ Ndị Nlekọta na usoro nchịkwa nke Mahadum Witwatersrand na 1993; onye otu nchịkwa nke Sub-Council on Intelligence, Council Executive Council na 1994, na onye isi oche nke Kọmitii Na-anọchite anya Nzuko omeiwu na ọgụgụ isi site na 1995 ruo 1996.
Tupu a họpụta ya dịka Mịnịsta na -ahụ maka ọhaneze na nchịkwa, Oriakụ Sisulu arụrụla ọrụ dị ka onye osote onye na -ahụ maka ụlọ site n'afọ 1996 ruo 2001. Ọ bụ Minista ọgụgụ isi malite na Jenụwarị 2001 ruo Eprel 2004; Minista na -ahụ maka ụlọ site n'April 2004 ruo Mee 2009; na Minista nchekwa na ndị agha ndị agha sitere na Mee 2009 ruo June 2012.
Ọ bụ Mịnịsta na -ahụ maka ọrụ na nchịkwa nke Republic of South Africa site na June 2012 ruo 25 Mee 2014.
Nnyocha/Ngosi/Onyinye/Ihe ịchọ mma/Bursaries na Publications
Nwada Sisulu ebipụtala ọrụ ndị a:
Ụmụ nwanyị South Africa na ngalaba ọrụ ugbo (akwụkwọ nta). Mahadum York na 1990
Ụmụ nwanyị nọ n'ọrụ na mgba mgbapụta n'afọ 1980
Gburugburu na Twentieth Century South Africa, Mahadum Oxford. 1991
Ọnọdụ ụmụ nwanyị na -arụ ọrụ na South Africa, nyocha ọnọdụ ọnọdụ South Africa. Kọmitii na -ahụ maka ikike ụmụaka ụmụaka. UNESCO. 1992
Nnyefe ụlọ na akwụkwọ ikike nnwere onwe: mgbama nke olile anya, agenda ọhụrụ na nkeji nke abụọ. 2005.
E nyere Nwada Sisulu nmekọrịta mmekọrịta mmadụ na ibe ya na Geneva n'afọ 1992. Ọrụ ya maka United Nations Center mere ka Mahadum Witwatersrand School of Business guzobe usoro ọzụzụ iji kwalite nkà ndị uwe ojii nke ndị otu MK.
O nwetara nturu ugo onye isi ala maka imebi usoro nzipu ụlọ site na Institute for Housing of South Africa na 2004; N'afọ 2005, ọ nwetara ihe nrite site n'aka International Association for Housing Science na nkwanye ugwu maka onyinye na mmezu dị ukwuu iji melite na idozi nsogbu ụlọ nke ụwa.
Ònye bụ Maazị Fish Mahlalela, osote onye minista na -ahụ maka njem nlegharị anya nke Republic of South Africa?
Maazị Azụ Mahlalela abụrụla osote onye minista na -ahụ maka njem nlegharị anya nke Republic of South Africa kemgbe 29 Mee 2019. Ọ bụ onye otu National African Congress na National Assembly nke South Africa.
Osote minista njem nlegharị anya azụ Mahlalela
O nwetara asambodo matric ya na ụlọ akwụkwọ sekọndrị Nkomazi ma nwee nzere nsọpụrụ na ọchịchị na idu ndú na Mahadum Witwatersrand.
Mgbe ntuli aka nke afọ 1994 gasịrị, etinyere ya ka ọ bụrụ onye otu omebe iwu ma na -ejere mba ahụ ozi dị iche iche na mpaghara na ndị omebe iwu mba.
Ọ bụ onye otu ndị omebe iwu mpaghara, ebe ọ na -eje ozi n'etiti ndị ọzọ dị ka onye isi oche na Kọmitii Na -ahụ Maka Akaụntụ Ọha (SCOPA) na onye isi oche na Kọmitii Akaụntụ Ọha nke South Africa, ma jeekwa ozi dị ka onye isi oche nke Ndịda. Kọmitii Mmepe Afrịka na Akaụntụ Ọha.
N'oge ọ na -arụ ọrụ na mpaghara Mpumalanga, ọ rụrụ ọrụ n'ọkwa ọkwa dị iche iche yana ọkachasị ọrụ ndị a, MEC maka ngalaba gburugburu ebe obibi na njem, MEC maka ngalaba ọdịbendị, egwuregwu na ntụrụndụ, MEC maka ngalaba nke ime obodo na okporo ụzọ, MEC. maka Ngalaba okporo ụzọ na ụgbọ njem, MEC maka Ngalaba nchekwa na nchekwa, yana MEC maka Ngalaba Ahụike na Ọha Mmadụ.
Ọ rụkwara ọrụ mbụ dị ka ANC Whip na Kọmitii Pọtụfoliyo na Ahụike na Mgbakọ Mba
Maazị Mahlalela nwere akụkọ nganga na mgba megide ịkpa ókè agbụrụ na South Africa, a chụpụrụ ya na 1980 wee nweta ọzụzụ ndị agha n'ọtụtụ mba dịka onye otu ndị agha ANC, Mkhonto We Sizwe Na 2002 a họpụtara ya ịbụ onye isi oche ANC. na Mpumalanga Province na 2002.